हेर्नुहोस नारकीय जीवन जिउदै पूर्वलडाकु, मनै भक्कानिएर आउने यस्तो छ अबस्था! – PathivaraOnline
Home > समाज > हेर्नुहोस नारकीय जीवन जिउदै पूर्वलडाकु, मनै भक्कानिएर आउने यस्तो छ अबस्था!
काठमाडौँ – आठ वर्षीय जीवन विक घरको सुरमा उभिएर ‘मलखाद’ माथि बसेकी अचेत आमाको पीडा हेर्ने गर्छन। आमाको जलेको खुट्टा अनि अशक्त अवस्था देख्दा उनी भक्कानिन्छन्। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा घरपरिवार त्यागेर पूर्वलडाकु ३२ वर्षीया निर्मला विक ‘साधना’ तीन वर्षदेखि अचेत छिन्। उनी बेलुका अँध्यारो बढ्दै जाँदा बाख्रा र कुखुरासँगै गोठमा सुताइन्छिन् । अनि बिहान तिनै घरपालुवा पशुपन्छीसँगै बाहिर सारिन्छिन्। त्रिवेणी ५ जुगार जबरबोटकी निर्मला आठ वर्ष अगाडि रोगले थलिएकी हुन्।
माओवादी लडाकुको पाँचौं डिभिजन ब्यारेक दहबनमा हुँदै निर्मला बिरामी परेकी थिइन्। पछि थलिइन्। अहिले मृत्युसँग लड्दैछिन्। निर्मला उपचार खर्चको अभावमा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेकी छन्। ‘छारे रोग लागेको भन्थे। बढी बिरामी भएको आठ वर्षजति भयो। तीन वर्ष यता त झनै केही थाहा पाउँदिनँ।
दिसापिसाब बसेकै ठाउँमा गर्छे’, निर्मलाकी ६१ वर्षीय सासू क्वारी विकले भनिन्। निर्मलाका दुवै खुट्टा चार वर्षअघि जलेका थिए। ‘घरमा एक्लै थिई। दुईवटै खुट्टा आगोमा परेछन्। सबै जलेको। अस्पताल लैजाने पैसा थिएन। जडीबुटी खोजेर उपचार गरें’, क्वारीले घटना सुनाइन्, ‘जलेर कुहिएको खुट्टा गनाएर घरमै बस्न नसकिने। अहिले त अलि सन्चो भ’छ।’ उनी बुहारीले भोग्नुपरेको पीडाका कारण खिन्न छिन्।
‘धेरै दुःख पाई यसले। अभागी रैछे। त्यत्रो वर्ष माओवादीका लागि लडेकी, आज मर्नका लागि लड्दैछे।’ दिसापिसाब तर्काउन नसकेपछि अनि जलेको खुट्टा गनाउन थालेपछि उनलाई तीन वर्षदेखि बाख्राको खोरमा राख्न थालिएको हो। ‘सुरुमा इन्डिया लगेर उपचार गरेको, भएन। धामी, झाँक्री, जडीबुटी सबै गरेम्। सन्चो होला भनेको, उस्तै छ’, सासू क्वारीले भनिन्। छोराले माओवादीको सेना हुँदा बिहे गरेको क्वारीले सुनाइन्।
‘बिहे गरेको केही समयमै बुहारी बिरामी परी। आठ वर्षको नाति छ। बिचरोले आमाको दूध पनि खान पाएन। भैंसी र बाख्राको दूध खाएर हुर्केको हो। घर चल्न धौ भएपछि परार छोराले अर्को बिहे गर्यो । यो बुहारी दिनभर बाहिर बस्छे, राति बाख्राको कोठामा लग्छौं’, क्वारीले भनिन्। निर्मलालाई वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा तत्कालीन माओवादी सेनाका सैन्य कमान्डर नन्दबहादुर पुन पासाङले लडाकुसम्बन्धी तालिम दिएका थिए। निर्मलाको बन्दुकको बलमा विभिन्न लडाइँ लडेका अर्का कमान्डर रोल्पाकै वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री छन्।
माओवादी लडाकुको पाँचौं डिभिजन दहवन रोल्पाका कार्यवाहक कमान्डर राजबहादुर बुढाजिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छन। तर उनीहरु कसैको नजर मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेकी निर्मलामाथि परेको छैन। निर्मलाको घर भएकै क्षेत्रबाट २०६४ मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनाव जिते। २०७० मा माओवादी नेत्री ओनसरी घर्तीले चुनाव जितिन् र सभामुख बनिन्। यसपाला वर्षमानले चुनाव जिते। तर उनीहरुले पनि निर्मलालाई सम्झेका छैनन्।
‘उहिले जोस थियो। ठूलै परिवर्तन हुन्छ र जनताको दिन खुल्छ भनेर बन्दुक बोकेर लडियो। आखिरमा नेता माथि पठाउन मात्र रैछ। अहिले पछुतो भइरहेको छ। गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्छ’, केही समय अगाडि नेपाल आएका बेला निर्मलाका पतिले गुनासो गरेका थिए। चरम गरिबीमा बाँचिरहेको निर्मलाको परिवारसँग उनको उपचार गर्ने सामथ्र्य पनि छैन। सासूले सकेको जति स्याहार गरेकी छन्। ‘कपडा दिनकै फेर्नुपर्ने तर छैन। यी अहिले पनि नांगै छे’, क्वारीले भनिन्।
निर्मलाका लागि न लगाउने कपडा छ न सुत्नका लागि बिस्तारा नै। जाडो, गर्मी, वर्षा, जहिल्यै खाली भुइँमा दिनरात बित्छ। निर्मलाको भोकप्यास साधनाको आवश्यकताले भन्दा पनि घरका सदस्यको फुर्सदमा भर पर्छ। माओवादी लडाकुको पाँचौं डिभिजन ब्यारेक दहबनमा हुँदै निर्मला बिरामी परेकी थिइन्। उनका पति पुर्वान विक अयोग्य लडाकुमा परेको थिए। निर्मला भने दोस्रो प्रमाणीकरणमा पनि परेकी थिइन्। त्यही बीचमा उनलाई उपचारका लागि पतिले भारत लगे।
उतै मजदुरी गर्दै उपचार गराए तर निको भएन। निर्मलाको उपचारमा करिब पाच सात लाख खर्च गरेको परिवारले बताएको छ। अब त उनीहरुसँग सामान्य औषधि किन्ने पैसा पनि छैन। निर्मलाका पति पुर्वान दोस्रो बिहे गरेर भारततिरै लागेका छन्।
बसमा नक्कली परिचयपत्र देखाउँदै हुनुहुन्छ ? २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ला !
टिकटकबाट चिनजान भएकि युवतीलाई होटेलमा बोलाएर…